septembre 2014 – filazantsaramada
JEHOVAH NO MPIANDRY AHY
Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy; mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin’ny lalan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 26, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur JEHOVAH NO MPIANDRY AHY
Fivoriana savaranon’ando Araka ny efa voaloaza tany aloha dia manatanteraka Seminera Fampiofanana mitondra ny lohateny “Fampitaovana ny olona masina” dimy isan-taona ny Feon’ny Filazantsara (FF). Ho an’ny taom-piasana 2014/2015 (Jona 2014- May 2015) dia ny 06-07 Novambra 2014 izao no kasaina hanatanterahana ny Seminera Fampiofanana voalohany. Fiangonana mpiara-miasa dimy no handray anjara amin’izany. Koa ho […]
Publié parfilazantsaramada septembre 25, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara
« Efa renareo fa voalaza hoe: « Tiava ny namanao », ary mankahalà ny fahavalonao. Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny Rainareo izay any andanitra hianareo. » Matio 5:43-45a Ity teny eto anatrehantsika eto ity dia ao antin’ny toriteny nataon’i Jesosy teny an-tendrombohitra; ary ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 22, 2014 septembre 22, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY LALAN’NY FITIAVANA…
Fanamafisana sy fanohizana ny fiaraha-miasa Efa taona maro no nanomboka ny fiaraha-miasan’ny feon’ny Filazantsara (FF) sy ny FJKM Iharamy Fihavaozana (SPAA 12). Rtoa Ratsimandisa Zo H. moa no nitandrina ny Fiangonana hatramin’izay firaha-miasa nisy izay. Noho ny fanendrena azy amin’ny asa Fanompoana vaovao dia Rtoa R Fanja, Mpitandrina no misolo toerana azy amin’izao fotoana izao. […]
Publié parfilazantsaramada septembre 18, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Famangiana Fiangonana
IREO ANTOKY NY FAHOMBIAZANTSIKA
« Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala. » (Matio 10:16) Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny lohahevitra eto ry havana dia manintona indrindra ny saiko, hieritreritra ilay tenin’Andriamanitra manao hoe: « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia […]
Publié parfilazantsaramada septembre 12, 2014 septembre 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IREO ANTOKY NY FAHOMBIAZANTSIKA
Miezaka mampahafantatra hatrany
Iray ihany ny fikendrena: hitombo, hiorina amin’ny finoana ary hizara ny Tenin’Andriamanitra amin’ny hafa. Fomba maro samihafa no entin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) hampahafantarana ny olona ireo asa iandraiketany sy atolony (Cours Biblique par Correspondance, Horonan-tsarimihetsika, Boky kristiana, fandaharana amin’ny Radio…) ho an’ireo izay liana sy maniry ny hiara-miasa aminy. Anisan’izany ny fihaonana amin’ireo raiamandreny Pastora […]
Publié parfilazantsaramada septembre 11, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Miezaka mampahafantatra hatrany
Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra
« Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa 20:35b Tiana ny mampahatsiahy fa mba ho fampandrosoana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra; ny Feon’ny Filazantsara dia manolotra maimaim-poana ireo sehatr’asa vokariny ho an’ireo mpiara-miasa aminy izay tsy mitsaha-mitombo (Fiangonana, Sekoly, Oniversite, olona tsirairay). Mba hahafahana manohy izany asa lehibe izany dia miezaka hatrany koa ny eto amin’ny Foibe […]
Publié parfilazantsaramada septembre 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-mientana ho fampandrosoana ny asan’Andriamanitra
NY VOKA-DRATSIN’NY TSY FAMELANA HELOKA!
« Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. » Matio 6:12 Ny famelan-keloka noraisintsika tamin’ny Batisa izay nanadiovana antsika tamin’ny fahotana nolovantsika tamin’ny niterahana antsika araka ny nofo dia nandraisantsika ny fananganana anaka avy amin’Andriamanitra Ray: lasa zanak’Andriamanitra isika! Maimaimpoana izany! Mila famelan-keloka koa anefa isika noho ny fahotana isan’andro, satria manota isan’andro isika: […]
Publié parfilazantsaramada septembre 5, 2014 septembre 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY VOKA-DRATSIN’NY TSY FAMELANA HELOKA!
Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. (Salamo 34:9) Toerana maro eto Madagasikara no mbola ahitàna loharano izay heverin’ny olona fa azo anovozana fitahiana: toy ny fanasitranana, fananan-karena, fahombiazana amin’izay rehetra atao, sy ny maro hafa koa. Hoy anefa ny mpanao Salamo: « Matahora an’i Jehovah, ianareo olony masina; fa tsy […]
Publié parfilazantsaramada septembre 1, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur LOHARANOM-PITAHIANA